တစ်ယောက်သောသူကြောင့် ရှိတဲ့ကားလေးပါအသိမ်းခံရတော့မယ့် သူမရဲ့အဖြစ်ဆိုး ကို ပြောပြ လာ တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေ - News MM
တစ်ယောက်သောသူကြောင့် ရှိတဲ့ကားလေးပါအသိမ်းခံရတော့မယ့် သူမရဲ့အဖြစ်ဆိုး ကို ပြောပြ လာ တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေ
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဂေဟာလေးတစ်ခုဖွင့်ထားပြီး အကူအညီမဲ့နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို တတ်အားသရွေ့ ကူညီပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပို့စ်တစ်ခုတင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့အသင်းရဲ့ကားတွေကို လိမ်လည်ပြီး ပေါင်နှံထားတဲ့ ရည်းစားဟောင်းရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
” လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်တုန်းက ကျွန်မရဲ့ အသင်းကား အပါအဝင် အခြားကား (အင်းစိန်မှ အသိအန်တီကြီးရဲ့ကား) များအားလိမ်လည်ပြီး AYA Bank မှာ ပေါင်နှံထားတဲ့ အမှုများ နှင့် အခြား အမှုများအတွက်
လိမ်လည်သူအား (၇.၄.၂၀၂၀ နေ့ မှ စ၍) တရားစွဲဆိုထားပြီးသော်လည်း (၂) နှစ်ပြည့်ခါနီး အထိ လာရောက်မဖြေရှင်းပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသောကြောင့် ကျွန်မရဲ့ အတိတ်ကံ အကြောင်းနှင့် ကျွန်မရဲ့ အယုံလွယ်ပေါ့ဆမှု တစ်ခုအတွက် ( ကျွန်မရဲ့ ချွေးနဲစာ စစ်စစ်များဖြင့် ) ကြားကစိုက်ရှင်းဖို့ အကြောင်းလေး ဖြစ်လာရပါတယ်..
ယနေ့ အချိန်ထိ သည်းခံစောင့်ဆိုင်း နားလည်ပေးပါသော AYA Bank မှ တာဝန်ရှိ လူကြီးများ အားလုံးကိုလဲကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်..တစ်စုံ တစ်ယောက်ကိုလဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်း မပြုပဲ လာရောက်ဖြေရှင်းဖို့ အတွက်လဲ တိုက်တွန်းပါတယ်.
.လာရောက်ဖြေရှင်းပါက တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးဖို့လဲ အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုထားပေမဲ့လုံးဝ မဆက်သွယ်လာသောကြောင့် ဒီစာလေးနဲ့ပဲ ထပ်မံ သတိပေးဖြစ်ပါတယ်..
ကျွန်မက နေပေမဲ့ အခြားခံရသူများက မနေပါဘူး..ဥပဒေကလဲ မနေပါဘူး..အားလုံး အဆင်ပြေအောင် လာရောက်ရှင်းလင်းစေချင်ပါတယ်..တရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တဲ့ အထိ စောင့်နေတာ အဖြေမဟုတ်ပါဘူး..
ကျွန်မ အနေ နဲ့ကတော့ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပဲ အချိန် တစ်ခု ရောက်ပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာပဲ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို အသိပေးပြောချင်ပါတော့တယ်ရှင်…” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ကိုယျပိုငျဂဟောလေးတဈခုဖှင့ျထားပွီး အကူအညီမဲ့နတေဲ့ ပွညျသူတှကေို တတျအားသရှေ့ ကူညီပေးနတော ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျက ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကြျနှာတှငျ ပို့ဈတဈခုတငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့အသငျးရဲ့ကားတှကေို လိမျလညျပွီး ပေါငျနှံထားတဲ့ ရညျးစားဟောငျးရဲ့ပွူနာတှကေိုဖွရှေငျးပေးနရေတာ ဖွဈပါတယျ။
” လှနျခဲ့တဲ့ (၃) နှဈတုနျးက ကြှနျမရဲ့ အသငျးကား အပါအဝငျ အခွားကား (အငျးစိနျမှ အသိအနျတီကွီးရဲ့ကား) မြားအားလိမျလညျပွီး AYA Bank မှာ ပေါငျနှံထားတဲ့ အမှုမြား နှင့ျ အခွား အမှုမြားအတှကျ
လိမျလညျသူအား (၇.၄.၂၀၂၀ နေ့ မှ စ၍) တရားစှဲဆိုထားပွီးသောျလညျး (၂) နှဈပွည့ျခါနီး အထိ လာရောကျမဖွရှေငျးပဲထှကျပွေးတိမျးရှောငျနသေောကွောင့ျ ကြှနျမရဲ့ အတိတျကံ အကွောငျးနှင့ျ ကြှနျမရဲ့ အယုံလှယျပေါ့ဆမှု တဈခုအတှကျ ( ကြှနျမရဲ့ ခြှေးနဲစာ စဈစဈမြားဖွင့ျ ) ကွားကစိုကျရှငျးဖို့ အကွောငျးလေး ဖွဈလာရပါတယျ..
ယနေ့ အခြိနျထိ သညျးခံစောင့ျဆိုငျး နားလညျပေးပါသော AYA Bank မှ တာဝနျရှိ လူကွီးမြား အားလုံးကိုလဲကြေးဇူး အမြားကွီးတငျပါတယျရှငျ..တဈစုံ တဈယောကျကိုလဲ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခွငျး မပွုပဲ လာရောကျဖွရှေငျးဖို့ အတှကျလဲ တိုကျတှနျးပါတယျ.
.လာရောကျဖွရှေငျးပါက တတျနိုငျသလောကျ ကူညီပေးဖို့လဲ အကွိမျကွိမျပွောဆိုထားပမေဲ့လုံးဝ မဆကျသှယျလာသောကွောင့ျ ဒီစာလေးနဲ့ပဲ ထပျမံ သတိပေးဖွဈပါတယျ..
ကြှနျမက နပေမေဲ့ အခွားခံရသူမြားက မနပေါဘူး..ဥပဒကေလဲ မနပေါဘူး..အားလုံး အဆငျပွအေောငျ လာရောကျရှငျးလငျးစခေငြျပါတယျ..တရားရုံးက ဖမျးဝရမျးထုတျတဲ့ အထိ စောင့ျနတော အဖွမေဟုတျပါဘူး..
ကြှနျမ အနေ နဲ့ကတော့ ဘာမှ မတတျနိုငျတော့ပဲ အခြိနျ တဈခု ရောကျပွီဆိုတဲ့ အကွောငျး စိတျမကောငျးစှာပဲ တဈစုံ တဈယောကျကို အသိပေးပွောခငြျပါတော့တယျရှငျ…” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Previous Article ရာသီဥတုအေးလွန်းတာကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ လူရွှင်တော် တိုင်းကျော်
Next Article သူမအပေါ် တခါရိုင်းစိုင်းတာ ခံရတိုင်း ဝဋ်တခုကြေသွားတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူထားတယ်လို့ ရင်ဖွင့်ရေးသားလာတဲ့ ဖွေးစိန်..